डा. बाबुराम भट्टराई काठमाडौं
२०७६ फाल्गुण १ बिहीबार ०८:४१:००
डा. बाबुराम भट्टराई, काठमाडौं
नेपाली इतिहासलाई हल्लाउने माओवादी जनयुद्धको थालनी भएको २५औँ वर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा त्यसलाई हेर्ने र बुझ्ने फरक–फरक दृष्टिकोण प्रवाहित हुनु स्वाभाविक छ । दृष्टिविहीनले हात्ती चित्रण गरेको नीतिकथामा झैँ त्यसबारे आगामी एक वर्ष परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक रूपमा विशेष जोडतोडले टकराइरहनेछन् । उदार पुँजीवादी कित्ताले त्यसलाई ‘आतंकवाद’ भन्थ्यो, पुनः भन्नेछ ।
रात्रि सपनाबाहेक निरन्तर देखिने दिवास्वप्न र आत्मालापमा पनि जनयुद्धकालीन गतिविधि, सहिद र बेपत्ता साथीको स्मरण र झझल्को आइरहन्छ । सुरेश वाग्ले र भीमसेन पोखरेल गोरखा, गाँखुको उकालो चढिरहेको । महेन्द्र श्रेष्ठ, शेरमान कुँवर र मोहनचन्द्र गौतम सिन्धुलीको अमलेमा बैठक गरिरहेको । चुनु गुरुङ रोल्पाको खरिबोटमा ‘तिमीसँग गहिरो माया बस्यो जलजला...’ गीत गाइरहेको । प्रकाश रिजाल (वसन्त) र विजय ढकाल पाल्पा रामपुरको भेलाबाट आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रतिर लम्किरहेको । गुल्मीको इन्द्रेगौँडामा हाम्रो टिमको अकस्मात् शाही सेनासँग जम्काभेट हुँदा अँध्यारोमा जंगल–जंगल हुँदै बाग्लुङतिर लागेको । रोल्पाको मिरुलमा हामी बसेको सेल्टरमा शाही सेनाको हेलिकोप्टरले बमवर्षा गर्दा बल्लबल्ल बाँचेको इत्यादि । यसरी मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमाल, पहाडदेखि तराईसम्मका लाखौँलाख योद्धा र जनसमुदायका रगत, पसिना र आँसुले १० वर्षसम्म लेखेको इतिहास थियो जनयुद्ध ।
प्रचण्डले नमानेपछि हामी मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनलगायत आन्दोलनलाई जोडेर नयाँ ढंगको समाजवादी आन्दोलन निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्दै छौँ । कुनै दिन सबै अग्रगामी, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्ति एकै ठाउँमा ध्रुवीकृत भएर देशमा बलियो वैकल्पिक शक्ति बन्ने हाम्रो विश्वास छ । क्रान्ति र परिवर्तनको प्रक्रिया समुद्रको छालझैँ कहिल्यै पनि रोकिँदैन, निरन्तर रूपले अगाडि बढिरहन्छ । हाम्रो पुस्ताले एउटा गर्व गर्नलायक क्रान्ति गरिसकेको छ । अर्को क्रान्तिका निम्ति नयाँ पुस्तालाई होस्टेमा हैँसे गरौँ । ख्याल राखौँ– बाघ बुढो भए पनि कहिल्यै घाँस खाँदैन ।
Tweet to @brb1954
#जनयुद्ध # बाबुराम भट्टराई
प्रतिगमन कहिल्यै पनि एकैचोटि आउँदैन, अंश-अंश गरेर आउँछ : डा. भट्टराई
वैशाखमा चुनाव हुँदैन : बाबुराम भट्टराई
नेप्से लगभग स्थिर : कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत पुग्यो पुँजीकरण
ओलीतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा फर्कौँ